Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Waajib ah » Safarka Beyond My New York City, Manhattan Zip Code
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Waxaa laga yaabaa inaan damco armaajad ay ka buuxaan Prada iyo LV, laakiin waxa aan si dhaqso ah u rabo waa fursad aan si ammaan ah ugu safri karo meel ka baxsan Sibbadhka Zip -kayga.
Markaan dhegeysanayo MSNBC, FOX iyo CNN, waxaa la iga digayaa kala duwanaanshaha COVID, baahida soo ifbaxda ee tallaalada xoojinaya, tirada sii kordheysa ee dadka xanuunsanaysa iyo dhimashada oo ku gabbanaysa meel ka durugsan.
Muddo laba sano ah, waxaa la i kala xirxiray gurigeyga, anigoo si xishoon leh u soo galay magaalada oo aan si buuxda u duubnaa, iskana ilaalinaya inaan la xiriiro dadka waaweyn, carruurta, iyo kuwa difaaca jirka hoos u dhacay.
Waxaan si taxaddar leh uga leexanayaa eeyaha iyo xayawaanka kale, anigoo ku xaddidaya is -dhexgalka shaqsiga terabi -yaqaankayga, tababaraha isboortiga, khasnajiga dukaanka, iyo soo dhaweeyaha miiska hore ee qolka jimicsiga.
Kani ma aha waddo lagu noolaan karo COVID!
Farta ku fiiq | Yaa eedda leh?
Waxaa jira dad badan oo la eedeynayo - laga bilaabo madaxa madaxa Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) oo aad uga xishooday inuu si dhakhso ah u garto masiibo markii uu arkay mid.
Xoghayaha Guud ee WHO waxaa si dhow loola socdaa marka ay timaado eedeynta madaxda sare ee kasbaday malaayiin doolar oo ku jira warshadaha maraakiibta maraakiibta kuwaas oo aad ugu xiran lacagtooda si ay ugu yeeraan xaalad degdeg ah - xitaa marka ay u soo jeediyaan dhakhaatiir khibrad leh oo khibrad u leh caafimaadka .
Waxa ku xiga kuwa la eedaynayo waa agaasimayaasha madaarka oo aad uga walaacsan inay ku dhegan yihiin qiimaynta halkii ay ku maalgelin lahaayeen lacag si ay u hagaajiyaan nidaamyada HVAC, ku beddelaan alaabta guriga iyo alaabta qalabka ka hortagga jeermiska ama keenaan aalado iyo farsamooyin cusub si loo kordhiyo hawlgallada aan xiriirka lahayn.
In la eedeeyo sidoo kale waa madaxda shirkadda diyaaradaha. Waxay sidoo kale doorbidaan inay ku qariyaan lambarada COVID gadaasha buug -yarayaasha dhalaalaya iyo fiidiyowyada qaaliga ah halkii ay ka hagaajin lahaayeen nidaamyada HVAC, ku beddeli lahaayeen dharka iyo alaabada waxyaabaha ka hortagga jeermiska, ama ay ku daraan robots liiska shaqaalahooda.
La socoshada mas'uuliyiintan waa hoggaamiyeyaasha dalxiiska ee ku nool "bad -mareenka huruudda ah" maadaama ay yihiin kuwo aan caqli -gal ahayn ama aan caqli -gal ahayn si loo garto cudurka markii uu ka tallaabay xuduudahooda, dariiqyadooda, marinadooda, iyo laamigooda, iyagoo ku soo duulay dalalkooda oo weeraraya asxaabta, qoysaska, iyo booqdayaasha. Ku soo dhaca qoyankaan waa dalxiisayaal si aad ah u indho -sarcaadsan is -maandhaafkooda iyo nacasnimadooda si ay u gartaan in marmarka qaarkood rabitaanka iyo rabitaanku ay sida ugu wanaagsan dib ugu dhigaan wanaagga dadka kale oo hadda laga yaabaa inaysan ahayn waqtiga ugu wanaagsan ee lagu biiri karo isu -soo -bax mootada ama ku faraxsan kooxda isboortiga oo leh boqollaal iyo kumanaan safarro isku fikrad ah.
Daqiiqad kasta oo maalin kasta ah, khabiirada telefishanku waxay leeyihiin karti ay ku wajahaan kaamirooyinka waxayna u sheegaan malaayiin daawadayaal in kasta oo ay jiraan digniinaha xun, haddana waa waqtigii laga gudbi lahaa amniga su’aasha leh ee xaafaddeena oo aan u safri lahayn meelaha leh caabuqyada COVID-19 ee sii kordhaya. . Makhaayadaha waxay rabaan inaan booqanno maqaayadooda iyadoon loo eegin heerka fayraskeenna. Farriintu waxay nagu dhiirri-gelinaysaa inaan soo qaadanno kaararka amaahda, carruurta, qoyska, iyo saaxiibbada oo aan ku qaadanno saacadaha soo socda wax-cunista iyo cabbitaanka meelaha bannaan ee laga yaabo inaysan lahayn nidaamyada HVAC-ka-casriga ah ama shaqaalaha xijaaban oo wejiga daboolan.
Thogaamiyaasha warshadahap weli ma qiran in hawlaha dalxiiska, gaar ahaan socdaalka, ay yihiin gaadiid lagu faafiyo cudurrada; warshaduhu waa inay noqdaan kuwa ugu horreeya ka -hortagga cudurrada - naqshadaynta iyo hirgelinta hab -raaca caafimaadka iyo badbaadada, nidaamyada, iyo habraacyada. Saraakiisha dowladda ee mas'uulka ka ah dalxiiska waa inay si cad u aqoonsadaan doorarkooda iyo waajibaadkooda, maadaama ay yihiin isku xirka u dhexeeya masiibooyinka iyo xubnahooda, iyagoo gelinaya booska inay xaddidaan ama xitaa ka mamnuucaan safarka inay tahay cabbir lagu maareeyo khataraha ka dhalan kara gudbinta fayraska.
COVID-19 wuxuu abuuray jawi dalxiis oo aan hubin oo aan kala firdhin doonin. Xitaa marka COVID-19 aysan ahayn hanjabaad, fayrasyada cusub iyo cudurrada kale waxay heli doonaan hab ay ku galaan adduunyadeenna, mar labaadna warshaduhu waxay la kulmi doonaan hubin la'aan (ie, muddada dhibaatooyinka, siyaasadaha taageerada dowladaha, dalxiiska dabeecadaha).
Fariinta dowladda ayaa seegtay
Cilmi-baaristu waxay soo jeedinaysaa in farriimaha COVID-19 ee ay dawladdu maalgeliso aysan shaqaynayn (waa ka wareer badan yihiin xog-ogaalnimada). Farriimaha waa la qasayaa maxaa yeelay ma gaadhayaan suuqyada bartilmaameedka ugu weyn mana bixiyaan macluumaad joogto ah oo waxtar leh oo wax ku ool ah.
Hoggaamiyeyaasha hoteelka, safarka, iyo dalxiiska ayaa sidoo kale ku mashquulsan abuurista fiidiyowyo midabbo leh oo shaqaalaha diyaaradda ee qoob -ka -ciyaaraya iyo kuwa sugaya ay ku dul socdaan sabuuradda; si kastaba ha ahaatee, fariimahani ma gaadhayaan suuqyada bartilmaameedka ah. Waayo? Sababtoo ah marka laga hadlayo warshadaha dalxiiska, kama hadlaan go'aamiyayaasha safarka aasaasiga ah, haweenka, mana qirayaan cabsida ay ka qabaan safarka inta lagu jiro COVID-19.
New York waa u baahan shahaadada tallaalka COVID-19s ku dhawaad ​​wax walba oo la xiriira safarka.
Markay timaaddo arrimaha amniga iyo amniga, haweenku way ka baahi badan yihiin ragga marka loo eego tallaabooyinka amniga ee ay u baahan yihiin haddii ay “dareemayaan” ammaan marka ay safrayaan.
Borotokoollada ay raadinayaan waxaa ka mid ah nadaafad -wanaag, adeegsiga jeermis -dileyaasha, jiritaanka caafimaadka iyo hubinta macluumaadka ee xirfadleyda daryeelka caafimaad ee la xaqiijiyay (tusaale ahaan, dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha, kalkaaliyayaasha caafimaadka), shahaadooyin rasmi ah oo ay soo bandhigeen ilo lagu kalsoon yahay (ie, isbitaallada, dugsiyada caafimaadka) , iyo go'aammada daryeelka caafimaadka ee ku salaysan xogta sayniska ee aan ku dhisnayn dhiirrigelinta maaliyadeed.
Dumarku waxay filayaan in huteeladu bixin doonaan nadiifin qoto dheer iyo shaqaale badan oo gacmaha lagu dhaqo. Martida iyo shaqaaluhu waa inay is -qariyaan, meelaha dadweynaha waa in la nadiifiyaa oo jeermis lagu ridaa jadwalka la daabacay oo ay ku jiraan meelaha la wadaago, meelaha lagala xiriiro (tusaale ahaan, biraha tareenka, miisaska, gacmaha, suunka).
Qolalka ciyaarta waa inay ku jiraan meesha (meelaha) si jeermis loo fuulo iyo wiishashka Adeegyada qolka dhexdiisa ah sida telefishinnada fog, furayaasha iftiinka, iyo heerkulbeegga waa in ay ka mid noqdaan hab-maamuuska. Bixinta adeegyada oo dhan waa inay ahaadaan kuwo elektiroonig ah, iyo gacmo nadiifiye gacmeed ku salaysan oo laga heli karo dabaq kasta meelaha laga soo galo hoteelka iyo meelaha cuntada/cabitaanka. Buffetyada waa in la tirtiraa ama dib loo naqshadeeyaa si loo shaqaaleeyo.
Dumarku waxay rabaan inay safraan oo ay haystaan ​​lacag ay ku bixiyaan. Waayo -aragnimada safarka ayaa bixisa ka -baxsasho joogto ah oo maalinle ah iyadoo la siinayo fursado isku -xidhnaanta bulshada iyo raaxaysiga hedonic. Waxaa muhiim ah in la xuso in haweenku ay yareeyeen waqtiga safarka iyo cilmi-baarista (Brooks and Saad, 2020) waxay ogaadeen in 60% dumarka deggan Mareykanka ay la kulmaan cabsi iyo walwal ku saabsan inuu ku dhaco COVID-19. Daraasad kale ayaa ogaatay in cabsida, karaahiyada, iyo mararka qaarkood xanaaqa ay noqdeen jawaabo shucuureed oo muuqda oo la xiriira ilaalinta nabadgelyadooda jirka inta lagu jiro COVID-19. Dumarka socotada ahi waxay dareemaan khataraha caafimaad ee ka imanaya fayraska, iyaga oo ku riixaya rajo -beel oo waqti ka dib isu beddela cabsi. Marka cabsida laga qabo halista caafimaad ee laga helo fayraska ay noqoto dareenka ugu weyn, waxay u muuqdaan inay ka fogaadaan dabeecadaha qaarkood sida safarka.
Meesha ka saar
Si loo yareeyo cabsida safarkooda, warshaduhu waa inay soo afjaraan habka silo ee kala qaybiya warshadaha oo soo saara farriimo isku dhafan. Iyadoo la kaashanayo wadashaqayn, warshaduhu waxay bixin karaan isku xirnaanta dhammaan qaybaha taasoo ka dhigaysa khibrada safarka mid cabsi yar. U -safrida/ka -noqoshada meel loo socdo waa inay ahaato mid aan kala go 'lahayn, laga bilaabo gaadiidka dhulka ilaa duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah, hoyga, iyo cuntada oo leh borotokoollo jaangooyo leh oo si cad looga arki karo safarka oo dhan.
Waaxaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee leh mas'uuliyadda dalxiiska waa inay si cad ula wadaagaan aragtidooda iyo talooyinkooda shirarka aan xadidnayn oo aysan soo qabanqaabin la -taliyayaasha xiriirka dadweynaha. Warbaahinta iyo macaamiisha waa inay ogaadaan oo fahmaan habka fikirka ee go'aannada la gaarayo socdaalka (iyo haddii kale); in la furo xuduudaha (ama maya); si loo dejiyo nabadgelyo, fayadhowr, iyo hab -raaca amniga (ama maya); iyo haddii ay jiraan kala duwanaansho, sababaha kala duwanaanshaha.
Dhammaan hoggaamiyeyaasha dadweynaha iyo kuwa gaarka ah iyo macaamiisha waa inay ka qaybqaataan naqshadeynta, hirgelinta, iyo adeegsiga alaabta daryeelka caafimaadka cusub, nidaamyada, iyo hababka oo leh qaybo isku dhafan si toos ah iyo si siman. Hoggaamintu waa inay ka timaadaa warshadaha, kuna salaysan karti ee aysan ku xirnayn isku xirnaanta dowladda ama saamaynta shaqsiyeed, ama hanti.
Si loo yareeyo cabsida loona yareeyo khataraha la xiriira safarka COVID, warshaduhu waa inay:
1. Wax ka qabashada dhammaan fursadaha la yaqaan ee faafitaanka fayraska (baaritaanka caafimaad ee martida iyo shaqaalaha maalin kasta).
2. U baahan caddaynta tallaalada martida ka hor intaadan aqbalin boos celinta iyo diiwaangelinta.
3. In la xoojiyo fogeynta bulshada inta loo socdo iyo hoyga.
4. Dhig carqalado jidheed oo u dhexeeya socotada, martida, iyo shaqaalaha.
5. In la mamnuuco ciriiriga ka jira garoomada diyaaradaha, diyaaradaha, meelaha soo jiidashada, dhacdooyinka, maqaayadaha, iyo huteelada.
Caadiga cusubi wuxuu noqon doonaa fal dheellitiran oo u dhexeeya ilaalinta waayo -aragnimo lagu qanco oo loogu talagalay dalxiisayaasha iyo u hoggaansanaanta tallaabooyinka adag ee ay maamulku ka qaadaan hab -raaca badbaadada iyo nadaafadda.
Maskaxdayda ayaa la sameeyay
Haddii dhammaan digniinaha iyo “ka warran haddii” aysan ku qancin… in dib loo dhigo safarka, su’aalaha jawaabaha u baahan ka hor inta aan kaararka deynta loo dhiibin wakiilada safarka waxaa ka mid ah:
1. Waa maxay heerka COVID-19 ku faafay meeshii loo socday? Tirada caabuqyada iyo/ama dhimashadu ma kor baa?
2. Waa maxay heerka COVID-19 ku faafay beeshaada?
3. Miyaad awoodi doontaa inaad ka fogaato (ugu yaraan 6 fiit) dadka aad la safraysid?
4. Saaxiibadaa/qoyskaaga safarka ah miyuu halis sare ugu jiraa COVID-19?
5. Miyaad la nooshahay qof COVID-19 oo aad halis u ah?
6. Gobolka ama dawladda hoose ee aad ku nooshahay iyo/ama meesha aad u socotaa miyay kaa rabaan inaad karantiil ahaato 14 maalmood ka dib safarkaaga?
7. Haddii aad ku xanuunsato COVID-19, ma ka maqnaan doontaa shaqada ama waajibaadyada kale?
8. Haddii aad xanuunsato markaad safraysid, waa maxay hab -maamuuska ay u baahan tahay dawladda hoose (degmadu) iyo waa sidee xaaladda daryeelka caafimaad (isbitaallada, dhakhaatiirta, daawada) meesha loo socdo? Caymiskaagu ma dabooli doonaa kharashyadan?
Sii wad taxaddar
Haddii qaabka safarkaagu yahay baabuur, qorshaynta safarka ka hor waxay u baahan tahay nadiifin dhammaystiran oo dhammaystiran iyo jeermiska gaadhiga. Dusha kasta waa in la tirtiraa (daaqadaha, suumanka iyo suumanka, isteerinka, gacanta albaabka, kontaroolada, sagxadaha, iwm.). Cuntooyinka fudud iyo biyaha ka sokow, haysashada saabuunta tirtiridda jeermisyada bakteeriyada iyo gacmo nadiifiye. Marka qof walba gaariga saaran yahay, daaqadaha ha furnaadaan markay suurtogal tahay. Haddii tani aysan suurtogal ahayn, isticmaal A/C oo u dhig hawo-haweedka hab aan dib-u-soo-kabasho lahayn.
Yaree tirada dadka ku safraya isla baabuurka oo u diyaari qof walba inuu xirto maaskaro (meesha uu iska leeyahay, ma aha sida xafaayadda garka). Joojinta gaaska ama cunto fudud? U qoondee orodyahanka gaaska iyo/ama cunto fudud - qof aan khatar sare ku jirin. “Orodyahannada” waa in ay gabi ahaanba weji daboolan yihiin oo ay haystaan ​​gacmo nadiif ah/fayoobay ka hor inta aysan ku noqon baabuurka.
Janaayo 21, 2021, xeer ay dejisay dowladda federaalku wuxuu go'aamiyay inay tahay "xadgudub ku ah sharciga federaalka MA AHAAN in la xidho maaskaro gaadiidka dadweynaha (Tilmaamaha CDC). Dhammaan duullimaadyada ganacsiga waa inay ka rabaan rakaabka inay xirtaan maaskaro wejiga (oo ay ku jiraan carruurta da'doodu tahay 2 iyo ka weyn). ”
Cidna ha aaminin! Wax fikrad ah kama haysatid qofka ku ag fadhiya, hortaada, iyo 3 saf oo kaa dambeeya - sidaas MASK UP! Intaa waxaa dheer, gacmahaaga nadiifi oo iska ilaali taabashada meelaha, wejigaaga, iyo qaybaha kale ee jirkaaga.
Iyada oo mihnadlayaasha warbaahinta iyo daryeelka caafimaadku ay ku talinayaan waxqabadyada bannaanka, imaanshaha baarkinka ayaa sii kordhaysa. Haddii aad go'aansato inaad iska-qorto daaweynta kaynta, aqoonsado jardiinooyinka u dhow guriga (loo arko inay ka khatar yar yihiin) oo la xiriir maamulka beerta si loo go'aamiyo haddii xaruntu ay la kulmeyso borotokoolka COVID oo leh qalab musqul oo nadiif ah (oo ay ku jiraan biyo socda, warqadda musqusha, saabuun, iyo shukumaannada gacanta ee la tuuri karo). Garoomada cayaaruhu ma furan yihiin oo ma buuxinayaan tilmaamaha CDC ee masaafada iyo fayadhowrka? Haddii baarkinku bixiyo barkadaha dabbaasha, tubbada kulul, ama meelaha kale ee biyaha ku salaysan, nidaamyo noocee ah ayaa loo isticmaalaa in martida lagu badbaadiyo oo COVID-19 lacag la'aan ah?
Haddii adiga iyo/ama lammaanahaaga socdaalku xanuunsadaan, aad tijaabiseen togan ama dhowaan lagu arkay COVID-19-HA AADIN, iyo iyadoo aan loo eegin xaaladda caafimaad, marna ha ku soo noqon jardiinada dadku ku badan yihiin.
Kahor intaadan wadaagin macluumaadka kaarka deynta si aad qol u dhigato, baar hoteelka ama barnaamijka nadiifinta hantida kirada (badeecadaha la isticmaalo, inta jeer ee nadiifinta, haddii shaqaaluhu ay weji daboolan yihiin oo ay jajaban yihiin, ma jiri doontaa 24 saacadood oo bannaan oo bannaan ka dib markii hal marti uu baxo, oo aad qabsato meel bannaan?).
Waxaa laga yaabaa inay ugu fiican tahay inaad nadiifiso booskaaga (si aad u hubiso). Soo qaado agabyada nadaafadda ee aad jeceshahay oo nadiifi sagxadaha ka hor intaan adiga iyo saaxiibbada/qoyskuba qaadan goobaha (yaasha).
Aan la saarin
Haddii aad tahay qof halis u ah oo qorshaynaya inaad safarto adigoon helin hab-maamuuska tallaalka, qaado baaritaanka fayraska 1-3 maalmood kahor bixitaanka. Xidho maaskaro dhammaan gaadiidka dadweynaha iyo meelaha bannaan ee gudaha (oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha iyo saldhigyada tareenka). Ka fogow dadka badan oo ka fogow ugu yaraan 6 fiit - ka fogow qof walba. Ku dhaq oo gacmahaaga si joogto ah ugu nadiifi gacmo-nadiifiye oo ah ugu yaraan boqolkiiba 60 aalkolo. Tijaabada waa in lagu celiyaa 3-5 maalmood safarka ka dib oo diyaar u noqo inaad guriga joogto oo is-karantiiliso ugu yaraan 7 maalmood safarka ka dib… xitaa haddii aad tijaabiso diidmo. Haddii aad tijaabiso wax togan, naftaada gooni u dhig si aad u badbaadiso dadka kale. Diyaar uma aha in mar labaad la baaro? Kaliya iska joog guriga si gooni gooni ah 10-maalmood kadib markaad ka soo laabato safarka.
Macluumaadka safarka ee la cusboonaysiiyay, ilaha wanaagsan waa: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID-19-Country-Specific-Information.html
E Dr. Elinor Garely. Maqaalkan xuquuqda daabacaadda, oo ay ku jiraan sawirro dhab ah, lama soo saari karo iyada oo aan oggolaansho qoraal ah laga helin qoraaga.
Ogosto 23, 2021 markay tahay 10:52
Haddii xeerarkan iyo codsiyadaas la raaco, dhab ahaantii adduunku wuu fiicnaan lahaa.